Ogaden News Agency (ONA) – Itobiya oo Dabasocota Lacagihii Laga Xanibay, Cabdi Ileyna u soo Kaxaysatay ..
Itobiya oo Dabasocota Lacagihii Laga Xanibay, Cabdi Ileyna u soo Kaxaysatay ..
Posted by ONA Admin	/ January 15, 2014
Wafdiga Itobiya ka socday oo Ku-xigeenka RW uu hogaaminayay waxay uga soo dageen gegadada dayaaradaha ee Heathrow si qarsoodi ah oo aan lasii sheegin xubnaha uu ka kooban yahay wafdiga, taasoo keentay in Booliskii dalka Ingriiska uu qaar ka mid ah wafdigaasi gooni ugala baxay saacadana lagu hayay Airport-ka. Dadka lala hahay waxaa ka mid ahaa Cabdi iley oo si gooni ah meel loogu hayay, arima aan gadaal ka soo xaqiijin doono darteed. Marka laga soo tago arimahaa oo raadreeb fog yeelan doona, waxaa baadhitaan aan ku samaynay oo meela kala duwan aan radinay ujeedada wafdigan balaadhan uu u socday, waxaanan noo suurtagalay inaan helno xogihii aan u baahnayn intooda badan.
Hadafka ugu weyn ee socdaalkooda waa siday u furdaamin lahaayeen lacagyowgii ay ka xayireen dowladaha Yururb, gaar ahaan dowladda Ingriiska oo lacag badan siin jirtay Itobiya iyo lacagihii EU-da oo iyadana qaayba badan la xanibay. Maadaama sababta ugu weyn ee loo jjojyay lacagahaa ay ahayd ku-tumashada xuquuqda aadanaha, waxaa wafdigan ay ku andacoonayaan oy doonayaan inay ka dhadhiyaan dalalka ay mari doonaan in ay hagaajiyeen dhibaatooyinkii ka jiray xabsiyada iyo maxkamadaha. Waxaa kaloo ay ku doodayaan sida laga soo wariyay inay u baahan yihiin lacagtii Ingiriisk uu siin jiray ee loogu talagalay Horumarinta hasa ahaatee lagu bixin jiray tababarka Liyu Booliska oo la joojiyay markii ay wargaysyada qoreen arintaasi, waxayna hadda ku andacoonayaan inay dhaqan celin u samaynaynaa Hawaarinta (Liyu Booliska) oo ay ka dhigayaan bolisk caadi ah oo dishibliin leh oo joojiya tacadiga shacabka.
Waxaa halkan ku hoos jira inay Itobiya uga jeedo arinta dhaqan celinta ah in eedii xasuuqa (genocide-ka) loo gaystay shacabka Somalida Ogadenya oo xaqiiqdeedii la hayo dusha loo saarayo maleesiyaadka Cabdi Ilay ee Hawaarinta, oo cidamada Itoobiya la doonayo in sawirkooda laga saaro meesha.
Waxaa ka mid ah ajendayaasha wafdigan in shirkadaha dacaayadaha sameeya heshiis lala galo, kuwaasoo socdaal ku aadi doona Ogadenya oo filimaan dokumentri ah oo dacaayad abuur ah ka soo samayn doona, si looga gado caalamka inuu isbadal ka jiro halkaa.
Ka dib Markay la kulmaan dowladda Ingriiska oo dalabaadkaa ay gudbiyaan waxay u kicitimi doonaan Brussels wafdiga intiisa kale oo Cabdi ilay laga reebay, oo socdaalkiisa iyo dantii laga lahaa uu ku egyahay London, inkastoo isha lagu hayo in meela kale loo diri doono. Waxay doonayaan wafdiga inay EU oo sidoo kale xayirtay lacagayowgii u bandhigaan beenta ay wadaan. Waxaa laga soo wariyay inay ku odhan doonaan soo arka Jeel Ogaden waan sii daynay dadkii. Waxaanan la soconaa oo caalamka la gaadhsiiyay in dadkii ku xidhnaa jeelkaa wixii ka nool in loo qaybiyay xeryaha Ciidanka Itoobiya iyo gobolada.
Waxaan meesha ka madhnayn nasiibdaradii caadiga ahaa ee umadda Somlaiyeed ku habsatay iyadoo safaaradda Itoobiya ee London Qabiil qabiil loogu shirinayo oo lagu mashquulinayo. Cabdi iley ayaa la kulmaya dadka masaakiinta ee eheladooda uu ka xidhay oo leh waxaa la idiin sii dayn dadka idinka xidhan ee maalgashi sameeya.